Udonswe ngendlebe osinde ezembeni - Ilanga News
Home Ezemidlalo Udonswe ngendlebe osinde ezembeni
IChiefs itshele uMathoho ukuba akhuphule amasokisi
SIDONSWE ngendlebe ukuba sikhuphule amasokisi isitobha seKaizer Chiefs okuvela ukuthi sisinde ezembeni.
ILANGA lihoshe ngemithombo yalo engaphakathi kwiChiefs ukuthi u-Erick “Tower” Mathoho, odlala emuva, ubizelwe emhlanganweni watshelwa ukuba enyuse amasokisi kungenjalo izinyawo zizogcwala udaka.
UMathoho uqede isizini edlule elimele. Ulimala nje ubevele isikimu esizwa ngendaba kwazise ubesolwa ngokuba yikhongco elibuthaka odo-ngeni lwasemuva.
Leli phephandaba lihletshelwe ngumthombo walo ongaphakathi kwiChiefs ukuthi uMathoho ubizelwe emhlanganweni yithimba labaqeqe-shi eliholwa ngu-Ernst Middendorp watshelwa ukuthi kuzofanele enyuse amasokisi kungenjalo ibhantshi lizogcwala umoya.
Lo mthombo uthe: “UMathoho ungomunye wabadlali obekufanele achithwe kodwa ngenxa yokuthi kade afika kwiChiefs wabe esenikwa elinye ithuba.
“Udonswe ngendlebe ngabaqeqe-shi ukuba enyuse amasokisi kunge-njalo kuzophoqeleka ukuthi achi-thwe. UMiddendorp vele akamuzwi-sisi kahle kanti sekunomfana omnca-ne amnyusele esikimini esikhulu afuna ukudlalisa yena ngale sizini,” kusho lo mthombo.
Leli phephandaba libuza uVina Maphosa wezokuxhumana kwiChiefs ngalolu daba uthe: “Umqeqeshi uhlale eba nemihlangano nomdlali ngamunye amtshele lapho kufanele alungise khona, akunasimanga esitheni.
“Akukho lutho olwenzeka ngoMa-thoho, ungumdlali wethu nje qha osanenkontileka nekilabhu,” kusho yena.
Previous articleULady Zamar uphumela obala ngothando
Next articleabalandeli bayifuna ikwamasipala namuhla imeya